Madaxweynahennu inta uu wado qabyo tirka, qurxinta iyo binaynta guryo cusub halla sugo. Maalinta uu kasoo jeesto dhismayaasha haynoo ahaato..W/Q Maxamedsidiiq dhame – somalilandtoday.com
Madaxweynahennu inta uu wado qabyo tirka, qurxinta iyo binaynta guryo cusub halla sugo. Maalinta uu kasoo jeesto dhismayaasha haynoo ahaato..W/Q Maxamedsidiiq dhame
Madaxweynahennu inta uu wado qabyo tirka, qurxinta iyo binaynta guryo cusub halla sugo. Maalinta uu kasoo jeesto dhismayaasha haynoo ahaato wax la qabtaba, inta ka horraysase haka yaabin danguud iyo daryeel ummadeed. Sannad isagoon joogin durba waa dhisme cusub, Eebboow qaadir hoggaan iimaan qabaanu ku weydiisannay !
Madaxda dareenka leh ee dunida waxay taariikh iyo dhaxal ka dhigtan dhismaha danta guud, ilaalinta hantida qaranka, abuuridda nolol rejo leh, weelaynta cashuurta ummadda. Himilo waxay ka dhigtaan muddada maamulka ay hayaan in ay rumeeyaan riyada shacabkooda oo ay ka
tagaan dhaxal qaran.
Madaxdeennuse waa macaash doon, midba mid ka darran, mid qasri dhiigga maatada ka dhista markuu talada ka dego, mid judhaba bilaaba faraqbsiga oo innaga xoolaysta. Wacad Alle hooyada harraddan, dhallinta tabaalaysan iyo shacabla dulma laga faa’idayn oo aan lagu faxaaxsanayn